Coluracetam ntụ ntụ (135463-81-9) hplc ma98% | AASraw Nootropics ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Nootropics ntụ ntụ / Coluracetam ntụ ntụ
SKU: 135463-81-9. Category: Nootropics ntụ ntụ
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Coluracetam ntụ ntụ (135463-81-9), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Coluracetam ntụ ntụ bụ ndị otu ìgwè nke racetam ọgwụ. Ọ na-emekarị ka ọ bụrụ ihe na-emetụ ya n'obi nakwa ka ọ na-enwe mmetụta dị mma na ịda mbà n'obi na nchegbu. Ọ bụ ezie na coluracetam ntụ ntụ na-ejikọta ya na uru ndị a, a kọwawokwa ya iji nyekwuo ihe omuma nke ọma ọ bụ ezie na ọ dị mkpa ka a na-aga n'ihu iji chọpụta kpọmkwem usoro ndị a na-aba uru.
Akwukwo ogugu nke Coluracetam
Ụkwụ Coluracetam nke ukwu na-emepụta ihe bụ isi
aha: Coluracetam ntụ ntụ
Molekụla Formula: C19H23N3O3
Ọbara arọ: 341.4
Ụkwụ Coluracetam nke ukwu na-eme ka ọgwụ na-apụta na SMART
Coluracetam ntụ ntụ (MKC-231) bụ ọgwụ racetam bụ nke a na-ekwu na ọ bụ ọgwụ mmụba na-eme. O nwere ike ichebe ịbanye n'ime eriri mgbe ha nwere nsogbu, ma ugbu a ọ dịghị ihe akaebe maka mmetụta nootropic.
Raw Coluracetam ntụ ntụ Usage
Nnyocha anụ ahụ na Coluracetam ntụ ntụ na-eji nruo ọnụ nke 300-3,000mcg / kg bodyweight, nke a na-atụgharị ya na njiri mmadụ nke 48-480mcg / kg ma ọ bụ (maka onye 150lb) 3.2-32.7mg n'ozuzu.
O yiri ka ọ dị ọtụtụ ngwa ngwa, na ọnụ ọgụgụ kasị elu na ọbara na gburugburu 30 nkeji na nkwụsị n'ime oge 3. N'ihi nke a, mgbakwunye nwere ike ịdabere na oge na-arụ ọrụ.
Kedu Ụdị Nsonaazụ M Kwesịrị Ịmanya Anya na Ụkwụ Coluracetam
A na-egosi kọlụm Coluracetam iji melite arụ ọrụ na ncheta na oke, na na tiori, otu ihe a na-atụ anya na ụmụ mmadụ. Nnyocha nke BrainCells Inc gosipụtara mmetuta ncheta na oke ndị e nyere ihe AF64A (neurotoxin neuron) maka ụbọchị asatọ na Coluracetam raw ntụ ntụ na 3 mg doses.Ha wee tinye ha site na Mazi Mmiri nke Morris iji gosi akara ha ike iji nweta ya, na ọbụna ruo 72 awa mgbe njinyesịrị 8 mg ikpeazụ, ha ka nwere ike. Ihe nchọpụta ọzọ dị na nchọpụta a bụ na nsonaazụ ahụ ka pụta ìhè ụbọchị atọ mgbe ọ gasịrị, ọ bụ ezie na ọnụọgụ ọbara nke Coluracetam uzuzu bụ nke a na-achọpụtaghị.
Mmetụta na Nchegbu
BrainCells Inc. achọpụtara na usoro ọgwụ 240 (kewaa n'ime 80 mg kwa ụbọchị) bara uru n'ịnagide ịda mbà n'obi na nsogbu GAD (ọrịa na-emekarị). Otú ọ dị, ọdịiche dị n'etiti ndị na-adịghị enweta ahụ efe na iji antidepressants. Mgbe otu dose gasịrị, enweghi ọdịiche dị iche iche, ma mgbe azịza abụọ nke 80 mg gasịrị, 36% emeela ka ọ dị elu n'oge nyocha nke ịda mbà n'obi.
Ejikọtara coluracetam ntụ ntụ na uru dị iche iche dị ka ọhụụ dị mma, mmata, na nghọta. Ọ bụ ezie na ọ nweghị nkwenye zuru oke iji kwado usoro ndị a na-enweta uru a, ndị ọkachamara kwenyere na Coluracetam ntụ ntụ na-arụ ọrụ n'akụkụ ụbụrụ nke na-agba ọsọ nyocha.
Ịdọ aka ná ntị na ngwugwu Coluracetam
Akwukwo nri nke a na-eme ka Coluracetam (MKC-231) bu ọgwụ nke racetam nke a na-ekwu na ya bu ihe nootropic. O nweghị nnukwu ihe àmà nke na - achọpụta ya, ma usoro nke ihe (ma ọ bụ usoro) yiri dị nnọọ iche site na mpaghara ndị ọzọ racetam dika Piracetam ma ọ bụ Aniracetam.
Coluracetam ntụ ntụ na - egosi na ya na usoro nke a maara dịka ebigbote choline dị elu (HACU maka mkpụmkpụ), nke bụ nkwụsịtụ nke na-agbatị ọnụ maka ịbịpụta ihe na ntinye maka ntinye aka n'ime acetylcholine neurotransmitter. Ịbawanye ọnụego HACU na-egosi na ịbawanye ọrụ nke eriri cholinergic, ya mere, ọ bụ ihe mgbaru ọsọ chọrọ maka mmelite nke uche.
Ihe omume n'ime oke (n'ihi na ọ dịghị ihe ọ bụla mmadụ na-ahụ ugbu a) na-akwado nkwado ojiji nke Coluracetam raw ntụ ntụ na obere oral doses iji chekwaa HACU nke na-adịghị mma site n'iji ọgwụ emepụta ọgwụ nke mara na HACU emerụ. Ihe njirimara a na-ekiri ihe dị iche iche dị na Coluracetam ntụ ntụ na HACU nke ụbụrụ nkịtị adịghị emecha hụ mmekọrịta ọ bụla dị mkpa.
A chọpụtala na akpụkpọ ntụ ntụ nke Coluracetam ka ọ na-ejikọta ndị transporters na anụ ahụ, ma a maghị ihe ọ na-eme n'otu oge.
N'ozuzu, ugbua enweghi ihe akaebe zuru oke iji kwado ojiji nke Coluracetam uzuzu maka mmelite obi. A ghaghi ichoputa ihe omumu iji mara ma o nwere oria ogwugwu na mgbe HACU nwere nsogbu (dika oria Alzheimer).
Dịka ọtụtụ ogige racetam, Coluracetam raw ntụsi na-eme ka ebido dịkwuo elu, mana ọ na-ebikwasịkwa na eriri mmiri. Kpọmkwem, Coluracetam ntụ ntụ na-ejikọta usoro HACU, bụ nke na-arụ ọrụ maka ịmịnye aka n'ime eriri. Nke a na-emewanye nke ọma n'oge acetylcholine synthesis process.
Ebe ọ bụ na Coluracetam ntụ ntụ na-eme ka nchekwa dị mma n'oge usoro a, a na-agbanwe ego ka ukwuu n'ime acetylcholine. Usoro a na - eme ka nchekwa, anya, na ncheta dịwanye elu. Ọ dị mkpa iburu n'uche ebe a, na ọ bụ naanị ihe ndị a na-ahụ maka ihe ndị a na-adịghị mma, ọ bụghị n'ime isiokwu ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ.
A na-egosikwa na ntụpọ akpụkpọ ntụ ọka Coluracetam ka mma melite AMPA, nke bụ usoro nke na-akpata ọrụ uche na nche.
Ọ bụ ezie na Coluracetam ntụ ntụ na-arụkọ ọrụ na ndị na-ebugharị ndị na-akpọpụta choline, enweghi ike igosi ihe mere ma ọ bụ otú mmekọrịta a si eme, ma ọ bụ ihe na-eme mgbe mmekọrịta ahụ gasịrị.
Powder Powder Coluracetam
Raw Coluracetam ntụ ntụ Marketing
Kwa Coluracetam ntụ ntụ nwere mmetụta ọ bụla
Ojiji nke Coluracetam ntụ ntụ dịtụghị mma na mmetụta ole na ole. Ọ bụ mmetụta nkịtị nke nwere ike ịnata bụ isi ọwụwa. Nke a nwere ike ịdaba site na ịkwado ntụpọ Coluracetam na Centrophenoxine, Alpha GPC, ma ọ bụ CDP Choline iji belata mmetụta dị otú ahụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụta Coluracetam raw ntụ ntụ, rịọ gị inye ụlọ ọrụ maka ntụzigharị ntụziaka maka esi edozi Coluracetam ntụ ntụ.
Esi zụta Kọluracetam ntụ ntụ si AASraw
Akwụkwọ ntụziaka ntụziaka Coluracetam Raw Powder